PetrPikora.com on March 20, 2018
Amamịghe echiche (UI, Intelligence Intelligence, AI) bụ sayensị sayensị dị iche iche n'ịmepụta ígwè ọrụ na-egosi ihe ịrịba ama nke omume ọgụgụ isi. Nkọwa nke "omume nwere ọgụgụ isi" ka bụ isiokwu nke nkwurịta okwu, nke a na-ejikarị dị ka ọkọlọtọ nke ọgụgụ isi site n'echiche mmadụ. John McCarthy bịara na 1955 maka oge mbụ.
Nchọpụta nke ọgụgụ isi na-arụ ọrụ nke ọma bụ ọkachamara na ọkachamara, a na-ekewa ya n'ọtụtụ ubi nke a na-ejikarị ejikọta ya. A na-ekewa nyocha niile ahụ n'ọtụtụ nsogbu ndị ọkachamara; ụfọdụ n'ime subfields na-emeso ihe ngwọta nke nsogbu ụfọdụ, ụfọdụ n'ime ha, dịka ọmụmaatụ, iji ngwaọrụ ndị a kapịrị ọnụ ma ọ bụ iji nweta ngwa ngwa. Ajụjụ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ omume na-ewu Amamịghe echiche na-jikọrọ ya na ihe nsogbu nke nsụhọ, na ajụjụ nke mgbawa rụrụ site na ụbụrụ mmadụ ma ọ bụ na ajụjụ nke evolushọn nke cognitive ike. Echiche ndị dị otú ahụ nke ọgụgụ isi na-akpata nsogbu ndị yiri ya.
Isi okwu na nnyocha na-agụnye Amamịghe echiche uche, ihe ọmụma, atụmatụ, mmụta, eke asụsụ nhazi (nkwurịta okwu), nghọta na ikike ime na ịgbanwe ihe. Ọbọ general ọgụgụ isi bụ ka otu n'ime ndị isi ihe mgbaru ọsọ nke nnyocha a na ubi.
Site psychosocial akụkụ nke wuru ọgụgụ isi bụ otu n'ime iche nke ndị na-abụghị ụmụ mmadụ ọgụgụ isi.
Nghọta nke ọgụgụ isi, karịsịa na ọha na eze, na-enwe mmetụta site n'amaghị ihe ga-ekwe omume na ihe na-agaghị ekwe omume na ọgụgụ isi, nke a na-akwado site n'echiche efu na-ejighị ya na "Science Fiction". Iji mee ka ọgụgụ isi dị ka ịdọ aka ná ntị, ọ dị mkpa iji chọpụta ókèala ndị a na iwepụ (mgbe ụfọdụ ọbụna mgbaasị) echiche. Ebumnuche ndị a kpebisiri ike site na njirimara nke ngwaọrụ ndị dị na ọgụgụ isi. Akpa, ọ dị mkpa ikwu ihe bụ ọgụgụ isi. Ihe omuma nke uzo mejuputara n'iji ma ihe ndi mmadu eji eme ihe dika ndi nwere uche. Ọrụ a na-eme site n'ụdị ụbụrụ mmadụ, ụwa dị adị n'ezie. Kemgbe ọ malitere (site na narị afọ 20), nhazi a emeela ụzọ abụọ:
1. Nyochaa ngosipụta ndị ọzọ nke ọrụ mmadụ
2. Nlereanya nke ụbụrụ ụbụrụ mmadụ a ghọtara, usoro netwọk ugbu a
Ngwunye nke Artificial ahọrọla ihe omume kọmputa nke dabeere na kọmputa maka nhazi (nhazi). The kọmputa nwere ike gbakwunyere site sensọ variables (anụ ahụ, chemical, ndu, wdg) Ma actuators (tentacles ije pụtara na - wiil, tracks, ụkwụ, wdg), nke a nwere ike ịkpata a mgbagwoju ngwaọrụ - cognitive robot amị n'ọnwa rover, a ụgbọ ala na-enweghị onye na-akwọ, wdg Ngwunye kọmputa ndị a adịghị mkpa ugbu a n'ihi na naanị anyị ga-enyocha ọrụ nhazi ozi, ya bụ, usoro kọmputa PC.
Asụsụ mmemme na-eme ka o kwe omume ịmepụta usoro ihe omume kọmputa bụ otu n'ime asụsụ ndị a na-asụ. Akụkụ bụ isi nke asụsụ ndị a bụ nkọwa nke nkọwa asụsụ ha niile na arụmọrụ niile dị n'elu ha. Ọ bụ ihe na-adịghị mma. Aghọtara na a ghaghị iwepu ma ọ bụ ịkọwa ihe ndị mmadụ na-ekwu, nke a na-akpọ ihe ọmụma, ma dochie anya nkọwa zuru oke. Ọ ga-emezigharị (nkwụsị), nhụjuanya nke imebi ahụ, nke ga-ewepụkwa mmetụta uche na ọnọdụ mmadụ, lee Vagnost. Nke a aka na-apụ n'anya ụmụ mmadụ niile (vagueness, subjectivity, emotionality) na n'ihi nke a curtailment bụ ala kpọrọ nkụ nke desert soulless igwe - wuru iwu asụsụ (kọmputa). The uru nke ọ bụla asụsụ Ọdịdị (yinye akara) na onye ọ bụla ọrụ nke ndị a owuwu na-ahụ kpomkwem ẹkenịm (na efu esịtidem vagueness), ie ka ọ bụla ihere maara enweghị obi abụọ ihe ha pụtara. Ihe nwere ihe ndị akọwapụtara kpọmkwem na-etolite otu anyị na-akpọ ụwa zuru oke. Nke a na-agụnye ọ bụghị nanị na kọmputa asụsụ, Turing igwe, ma na-mgbakọ na mwepụ, iwu mgbagha, kpọmkwem egwuregwu (Chess, checkers, kaadị egwuregwu, wdg), kpọmkwem sayensị. Ọdachi ọzọ maka ụwa nkịtị, bụ nke na-egbochi imebi obi, bụ:
Site n'igosi ihe ojoo n'adighi oke n'uwa, anyi egosiputaghi nani mmuo nke madu nke meghariri ihe dika echiche efu na asusu di iche iche, kamakwa ikike nke imeputa echiche. Ya mere, anyị atụfughị ​​mmasị nke nnwere onwe ahụ kpọmkwem n'ụwa. Ọnwụ nke ntụgharị uche nke nnwere onwe, enweghị ike ịkwasa ya na ụwa site na njedebe nke imebi iwu, bụ nzọụkwụ site na mmadụ ruo igwe na-enweghị isi; bụ nzọụkwụ site na onye dị ndụ nye onye na-adịghị ndụ na nghọta ọmụma. Dịka ọmụmaatụ, na mgbakọ na mwepụ, ọkpụkpụ mmadụ ga-achọ ụzọ ị ga-esi chọpụta otú a ga-esi họrọ mmekọrịta mmekọrịta na mgbakọ na mwepụ iji nweta njikọ (achọrọ). N'ihe atụ dị mfe, a na-egosipụta nke a na peeji nke Sayensị Kwesịrị. Ihe nnwere onwe metụtara mgbakọ na mwepụ bụkwa eziokwu na egwuregwu kaadị ma ọ bụ chess. Ihe amara nke kaadị ma ọ bụ chess ibe mara nwoke a ma ama, dịka iwu nke egwuregwu ahụ. Ọkpụkpọ ahụ (nke a ga-ebugharị) ga-etinye ikike ya n'ọrụ iji họrọ ọrịa strok na egwu dịka iwu. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ mgbakọ mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ egwuregwu ahụ kpọmkwem ga-eme maka kọmpụta ahụ, a ghaghị ịmepụta ọrụ nke onye na-ebido ya. Onye mmemme ahụ aghaghị ịhazi ọrụ nke onye injinia (mathematician or player) nke mere na, mgbe egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ na-apụta, ihe (mepụtara) nke a ga-ebugharị nwere ike ịmepụta nzọụkwụ ọzọ. Okwesighi icho igwe anwansi na komputa, ihe anwansi ya bu ihe di ka anwansi nke nchikota, ma obu onu ogugu, na enweghi ike ibughari, na adighi ndu. Hybatelem dị n'ọnọdụ ọbụla mmadụ, ikike ọgụgụ isi ya. N'adịghị ka ígwè ọrụ ndị ọzọ na-edozi ma ọ bụ na-edozi usoro, ihe nhazi kọmputa na-eme, ma ọdịiche a ekwesịghị ịbụ onye na-eduhie. Okwesighikwa iduhie ihe omuma a nwere ike meputa usoro a n'uzo di otua o nwere ike igbanwe onwe ya, n'ihi na n'agbanyeghi mgbanwe nile, o gabu akuku nke uwa zuru oke ma nweghi ike ihapu ya. Akụkụ dị mkpa nke igwe bụ ọnụọgụ (mgbe ụfọdụ, nkenke, na-enweghị ike ịchọta) site na ụlọ ọrụ ndị a haziri ahazi (ihe, ozi) na iji ntinye ike ume nke ọzọ maka ọrụ a. Ihe nkedo a na-agbagharị n'elu ala na-ejupụta ya na oke ikuku ya na-emeghe ohere ndị na-agaghị adị ma ọ bụrụ na mmadụ (ọtụtụ puku mmadụ) na-akwado ya na pebbles na shọvel. Igwe ahụ na arụmọrụ ya (na ngwa ngwa nke arụ ọrụ tụnyere nwoke) na-enye ohere ịhụ mmemme, ma ọ bụghị ihe a na-apụghị ịmata aghọta, ma ọ bụ nkedo nkume ma ọ bụ nhazi ozi.
Nke ahụ bụ ngwá ọrụ - kọmputa nke nwere ọgụgụ isi maka nhazi. Ọ ghaghị iburu n'uche na mmemme asụsụ (ma si otú ahụ na kọmputa) nke kpọmkwem n'ụwa bụ kpọmkwem igwe na exactness ụgha mgbe ha nọ na mkpọrọ mmadụ zuru okè psyche na pụtara nke asụsụ owuwu na arụmọrụ-ha.
Ndị nwere ọgụgụ isi na-ekwu ụdị nsogbu abụọ, dabere na ha na-emetụta ụwa ma ọ bụ na ọ bụ. Ndị na-abụghị nwanne na ata ụwa, ha bụ kpọmkwem ụwa na-eg. The kpọmkwem egwuregwu (ịhụ kpọmkwem) ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ na-egosi (Theorem egosi). Nke a bụ nṅomi nke ụwa zuru ụwa ọnụ na ụwa zuru oke, na ntinye ihe a na-ebelata bụ iji gosipụta ihe mgbakwasị ụkwụ ahụ. Ihe kachasị ama bụ nhazi nke ọkachamara chess ọkachamara. E restrictive mgbochi nwere ike na-anọchi anya ndị mgbagwoju algọridim (lee kwa notation) ịme ngosi uwe haziri na ikekwe eg. Number nke n'ịgwa àgwà nke na ọnụ ọgụgụ na cheesi, ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ na Amamịghe echiche ụdị.
Ọzọkwa, ọnọdụ dị mgbagwoju anya ozugbo nsogbu ụwa dị. Nanị akwa dị n'etiti otu kpọmkwem na ezigbo ụwa bụ ngwá ọrụ anyị na-akpọ ọtụtụ (ike ígwè, ọnụọgụ ion na ngwọta, ike ọkụ, na ihe ndị ọzọ). Ọ bụ ọsọ na ma ndị a ụwa, n'ihi na kpọmkwem ụwa na-kpomkwem delineated (na efu esịtidem vagueness nke ha nkọwa), ie, ka onye ọ bụla nọ n'ubi gụrụ akwụkwọ mmadụ enweghị obi abụọ ọ bụla maara mkpa ya, na ke ata ụwa bụ elementrị measurable nyocha n'ime ụwa a, ma si otú a na-anọchite anya onye nnọchianya ya. Ọ bụ isi nkuku nke sayensị nkịtị. A ghaghị ikewapụta nsogbu nke ọgụgụ isi nke metụtara ụwa dị adị na ụzọ abụọ.
Nke mbụ n'ime ha bụ na ihe nlereanya na-eji aka wuru ọgụgụ isi ihe ọmụma banyere ata ụwa ga-adị otú ahụ otu set (ndabere) ihe ọmụma na-erite ihe ihere na isi ihe ọmụma na-ezo, ma a pụrụ ewepụtara ha. A na-akpọ ihe nlereanya a usoro usoro ọkachamara. Ebe ọ bụ na ihe nlereanya a ga-abụ akụkụ nke ihe kpọmkwem ụwa, ọ dị mkpa na ihe ọmụma e dere na keakamere iwu asụsụ (mgbakọ na mwepụ, iwu mgbagha, mmemme asụsụ), a asụsụ na kpọmkwem nkọwa, ya mere o nwere ike ịbụ a eke asụsụ na-edoghị anya, nke mmetụta uche na nke onye nkọwa - nkọwa. Ya mere, a ghaghi inweta ihe omuma a site na usoro sayensi ziri ezi. Ọ ga-kwuru na ihe ọmụma nweela ndammana na-edochaghị anya, nke onye na nke mmetụta uche ihe ọmụma ụmụ mmadụ na-egosipụta n'ụzọ eke asụsụ, ha na-adịghị nyefee ka kpọmkwem ihe ọmụma, kpọmkwem iwu asụsụ na-akọwa-ahụ Vagueness. Ọ bụrụ na ndị asụsụ Ọdịdị nke eke asụsụ etinyere n'ime kpọmkwem ụwa (mgbakọ na mwepụ, iwu mgbagha, mmemme asụsụ), anyị ga-enye ha eke, onye kenyere pụtara, n'ihi na kpọmkwem ụwa bụghị a na-akpata na gaara enwe ike ikpebi, tinye na usoro (ọ ike naanị mmadụ psyche). E nwere ike ịhazi nhazi asụsụ ndị a dị ka ụdị akara ọ bụla, mana ha enweghị nkọwa ha. Ma site na-amaghị ihe, ma ọ bụ ikekwe na-eleghara hotara na mbụ-ekwe omume nke na-abanye kpọmkwem ụwa, na mmalite nke echiche nke ihe e kere eke nke wuru ọgụgụ isi pụtara hiere mgbalị iji ihe ọmụma na-anọchi anya ke eke asụsụ, ewepụtara mmadụ ihe ọmụma.
Ụdị nke abụọ nke nsogbu ndị metụtara ụwa dị adị bụ usoro nke ime ihe ike nke mmadụ, nke bụ, usoro nke ụwa dị adị. Ndị a Filiks na-apụtụghị ejikọrọ na n'ime-edochaghị anya, ya mere, e nweghị kpọmkwem akwa na ụwa, n'ihi na e hotara na mbụ akwa, nke bụ agbanwe, na-achọ a machibidoro na esịtidem vagueness, na ọ bụ na ihe banyere vnitropsychických Filiks pụta ụwa akụkụ. Ya mere, a n'alaka ụlọ ọrụ nke wuru ọgụgụ isi, nke anyị na-ẹkedọhọde n'elu: Modelling mpụga ngosipụta nke nwere ọgụgụ isi mmadụ ọrụ, ọ bụghị ọbụna na-agbalị, na enweghị m ngwaọrụ. Otú ọ dị, alaka ụlọ ọrụ nke abụọ nke ọgụgụ isi, nke na-eduzi site n'ịṅomi ọrụ nke netwọk na-adịgboroja, ga-achọpụta. Na-eme ya na elu olileanya, ma, ọ dị mkpa iji chọpụta na-ókè nke nlereanya a nwere ike ịgụta ezigbo ọrụ nke ụbụrụ mmadụ, esịtidem Filiks na pụta ụwa vagueness. Na akụkọ ihe mere eme, Warren McCulloch na Walter Pitts na 1943 gosipụtara ụkpụrụ mbụ nke mgbakọ na mwepụ. Ọ dị oké mkpa na (mgbakọ na mwepụ) nlereanya bụ kpọmkwem ụwa, na na niile ha na-eso ụzọ na-aga otú a, ndị mbụ dị mfe nlereanya nke a neuron, ma na-ghọọ, esiwanye mgbagwoju forms (dị ka ihe pụrụ ichetụ n'echiche na ọkachamara ahụmahụ nke na-ede akwụkwọ) ma ka dị ka ihe mgbakọ na mwepụ (kọmputa), ihe nlereanya nke ụwa zuru oke na-egbochi imebi iwu nke ime. Enweghi ike imeghari uzo di omimi nke di n'onu mmadu, nke bu, okwu omuma ma o bu komputa. A na-eji nlezianya nyochaa usoro na ọrụ nke neuron rụrụ n'okpuru ihe nchekwa microscope. Stuart Hameroff n'akwụkwọ ya. Na neuron edepụtara dị ka nnọọ mgbagwoju Ọdịdị enwe ya obodo kwụụrụ omume dabeere na nhazi nke buru ibu ichekwa ihe ọmụma, na-eji isi na-eke omenala (ọgụgụ isi) mkpebi nkà nke imekọ ihe ọnụ na ndị ọzọ akwara ozi. Ụdị ihe ndị dị otú ahụ dị ihe dị ka ijeri 100 n'ime ụbụrụ mmadụ. Ebe ọ bụ na ụbụrụ mmadụ enweghị ike ịmegharị ihe dị iche iche, ọ ga-achọrịrị ịchọ ihe ndị ọzọ eji eme ihe nlereanya, ma eleghị anya, ihe ndị dị ndụ. Vnitropsychické Filiks na ya pụta ụwa linkage ka vnitropsychickou vagueness si dị iche na niile siburu mụọ Filiks aa na ata ụwa, eg. Physics, onwu, wdg Ka search maka ọhụrụ ụzọ (na nke a, kwụpụ hapụ ụzọ programmatically depụtara Amamịghe echiche), ya mere e nwere mgbalị jiri ụbụrụ ụbụrụ dị ndụ, dị ka oke dịka nkịta kọmputa nke netwọk na-adịghị. Ụdị ụbụrụ ụbụrụ ndị a bụ, site na interface dị mma, na-etinye aka na usoro nhazi (kọmputa) nke bụ akụkụ nke, dịka ọmụmaatụ, mgbatị ígwè.
Nchịkọta, ya mere, anyị nwere ike ịsị na ókèala nke ọgụgụ isi na-akọwapụta:
- Mgbagwoju anya nke algọridim
- Maka akuko nke uwa, o di nkpa iji ihe omuma nke achota site na ihe omuma nke sayensi ziri ezi, nke edere n'akwukwo nke oma (site na asusu nke ndi ozo) nke ndi mmadu na-etiti. Ọ gaghị ekwe omume iji ihe ọmụma na-enweghị mgbagwoju anya nke a na-enweta site na ihe ọmụma ụmụ mmadụ, nke na-anọchite anya okwu na-adịghị mma, nke mmetụta uche na nke anụ ahụ. A pụghịkwa ịtụgharị ha n'asụsụ ọdịdị. Ebe ọ bụ na asụsụ a na-ahụ anya nwere ike na-anọchite anya ezi ihe ọmụma ụwa nke enwetaworo site na nkwenkwe na-enweghị ihe ọmụma nke sayensị ziri ezi, na nke a bụ ntakịrị ihe omimi nke ihe ọmụma ụmụ mmadụ, njirisi nke ọgụgụ isi na nke a dị oke njedebe.
- Mgbagwoju anya ozo nke esite n'ime psychic processes. Enweghị ngwá ọrụ asụsụ ọ bụla iji kọwapụta ihe ndị dị na ụbụrụ mmadụ, nke na-enweghị mgbagwoju anya ka e wee nwee ike idozi ha site kpọmkwem ụwa - kọmputa. Ya mere, ọbụna usoro netwọk nke ekwesịrị site na ụwa zuru oke apụghị ịbụ ezigbo ihe nlereanya zuru oke, nke na-enweghị isi nke mmadụ psyche n'ime ụwa n'ezie - ụbụrụ mmadụ.
Ụzọ nwere ike isi mekwuo mmepe
Usoro ihe omuma nke madu psyche nwere ihe ndi ozo - ihe omumu nke ihe ndi ozo, nke di ka ihe ha bu, nke iwu nke anu aru na nke anu aru puru ighota. Ọ bụrụ na a ghọtara ma kpebisie ike ịmepụta usoro ihe omume nke nwere ike ịmepụta ihe, a pụrụ imetụta usoro ndị a, ma eleghị anya ọbụna n'ụdị nke ọzọ karịa ụbụrụ nke mmadụ. Ọ bụ nchọpụta nke ụkpụrụ nke gburugburu ebe obibi na-enweghị obi ụtọ n'ime obi, ma si otú a nghọta nke ụkpụrụ nke ndụ na nghọta.
Ozi metụtara nwekwara ike dị na isiokwu Turing ule.
Na nke a tụnyere na-chere na Turing ule kwupụtara kọmputa sayensị Alan Turing na 1950 na ya n'isiokwu "Mgbakọ ígwè na ọgụgụ isi". Na a nutshell na ọ sị na ihe nwere ọgụgụ isi ígwè ọrụ ike na-ekwu, ma ọ bụrụ na anyị na-apụghị ịmata ya asụsụ mmepụta si asụsụ mmepụta ụmụ mmadụ.
Chinese Room esemokwu a na-ahuta ka a ịgbagha na Turing ule. Ịtụle na e nwere a igwe na ike simulate omume nke nwere ọgụgụ isi set nke njikere Ibọrọ niile kwere omume ajụjụ enweghị ihe ọ bụla karịrị 'na-eche echiche ".
Ị nwekwara ike ịchọta ozi metụtara ya na Neuron Network.
Ru nural netwọk na Amamịghe echiche nwere omume ụkpụrụ kwekọrọ ekwekọ ndu owuwu. Ha iso nke mgbakọ ụdị nke akwara ozi na-ebunye n'ókè ọ bụla ọzọ na-agbanwe ha iji nyefe ọrụ ọzọ "akwara ozi".
mkpụrụ ndụ ihe nketa mmemme
Ozi metụtara nwekwara ike dị na isiokwu Genetic Programming.
Genetic mmemme na-adịghị erube nnọọ na-ekwu okwu a n'aka maka idozi nsogbu nke wuru ọgụgụ isi, ma a n'ozuzu programmatic obibia, nke kama nke na-ede a kpọmkwem algọridim maka idozi ọrụ a nke na-achọ evolutionary usoro ụzọ.
ọkachamara na usoro
Ozi metụtara nwekwara ike dị na edemede Expert System.
The ọkachamara usoro ihe omume kọmputa nke nwere ọrụ nke na-enye ọkachamara ndụmọdụ, mkpebi ma ọ bụ nwere ike ikwu na a ngwọta na a kpọmkwem ọnọdụ.
Expert usoro e mere na ha nwere ike ijikwa na-abụghị ọnụọgụ na-edochaghị anya ọmụma lebara ọrụ a na-apụghị edozi site omenala algorithmic usoro.
State ohere search
Ozi metụtara nwekwara ike dị na edemede State ohere search.
Karịsịa na-emepe emepe algọridim maka idozi classic egwuregwu (Chess, ladies), ọ na-egosi ndị kwesịrị ekwesị na-akọwa ihe a set nke ọnọdụ anyị nwere ike isi na-na egwuregwu, na o kwere omume Nkea ma ọ bụ ikwu n'ụzọ n'agbata na-ekwu na mmalite na ọgwụgwụ ọnọdụ. Anyị na-achọ mgbe ahụ ụzọ si mbụ ala ka ikpeazụ na-ekwu, nke pụtara na anyị ihe ịga nke ọma.
Ebe ọ bụ na obodo oghere nwere ike ịbụ nnukwu (atụ, na-aga na egwuregwu), na ụfọdụ ọbụna na-enweghị nsọtụ, ọ dị mkpa na-ahọrọ a nkọ usoro nke trimming ekwesighi ụzọ na valuing ọnọdụ.
Ozi metụtara nwekwara ike dị na isiokwu Data Mining.
Large data tent (mgbe echekwara na ọdụ data) banyere a usoro na-adịghị usable na nghọta ziri ezi, ọbụna mgbe ha nwere ozi na ihe nakawa etu esi nke omume nke na ekwu na usoro. Mining usoro atọghata data n'ime a kọmpat na doro forms akọwa a usoro na-ọzọ na ọdabara.
Na a sara mbara uche, ọ bụghị naanị ndị mbụ nhazi nke data (nọmba, urụk, categorical data), ma na-na nhazi nke ụda, oyiyi (digital image nhazi) video, asụsụ obodo (lee usoro nhazi asụsụ, ikuku) na bioinformatics (bioinformatics).
Ndapụta na-dị iche iche dị iche iche ihe aga-eme, na-adabere na ihe anyị chọrọ ịbụ na ihe (na otú ọma) na anyị nwere ike dredge elu.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Machine Learning.
ịga nke ọma algọridim
1979 afọ, ịmata kọmputa n'ụwa onye mmeri na egwuregwu nke backgammon.
Egwuregwu Royal Chess bụ isiokwu nke nyocha kemgbe mmalite nke sayensị kọmputa. A jikọtara ihe ngwọta maka nsogbu ahụ na ọgụgụ isi site ná mmalite, mana mmeri agaghị apụta ịchọta ọgụgụ isi. 1997 meriri Deep Blue site na IBM, onye na - akwado Garri Kasparov. Otú ọ dị, Blue Deep bụ usoro ngwakọ na ngụkọta nke ndị mmezi. Ọ bụ ihe gbasara ike. Ugbu a ugbu a agakwaghị enwe ihe ịga nke ọma, ọ na-enwekwu ihe ịga nke ọma.
Chinook bụ usoro ihe omume maka ịkpọ ihe English nwaanyị, onye creators na July 2007 kwuru na ha nwere ike ghara ida. N'ihi na ọtụtụ afọ tupu mgbe nile butchered mmegide bụ ụmụ mmadụ. Nke a n'ihi na-enweta site a zọpụta nke arụrụala ike mgbe ịgụ isiokwu ọnọdụ n'etiti nke egwuregwu na ezi nchekwa data na igba egbe ọnụ.
Computer mmemme na-aga na-akpọ nke ọma nwere bụghị. Nke a bụ doro anya na n'ihi na Goban (gaa na osisi) bụ nnọọ ọtụtụ na onye ọ bụla ọzọ na-agha ụgha nkume enwekwu mgbagwoju anya nke ime mkpebi, nke Otú ọ dị, ndị mmadụ na-enwe ohere na-aka n'ihi na ha na ebum pụta ụwa nwere ikike ịmata shapes. Ma nke kacha mma na programmụ na-eji ma arụrụala ike ngwọta (ọzọ osisi search) na nsinammuo nwere ike ndikan (2016) na nna-ukwu.
Air ọgụ Ai Alfa pụrụ ịkpata ikuku ọgụ mma karịa ụmụ mmadụ na-anya ụgbọelu.
Ụfọdụ aga-eme maka ọgụgụ isi ule Ai bụ ike obibi mma karịa ọtụtụ ndị.
Ai nwekwara ike na-ejizi mirror ule.
Ai bụ enwe ike ikpebi ihe ize ndụ nke obi ọdịda mma karịa a dọkịta.
Ai na-eme ka ọ dị mfe na-eṅomi mmadụ olu.
Nsogbu bụ na AI na-akpa àgwà dị ka igbe ojii. Mmadụ aghaghi ikwere na ihe ga-aka mma (nke dị mfe) karịa ya, n'ihi na ha aghọtaghị ha. A na-akpọ ya mgbe ị kọwachara AI (XAI).
AI nwere ike ikpochapụ ntụgharị uche mmadụ. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịmepụta ntụgharị onwe ya. Ma mmadu nwere ike iche echiche.
Nzuzu nke artificial Culture
Ngwa ndị nwere ezi uche bụ isiokwu na-enye ekele maka ndị edemede edemede sayensị. Isaac Asimov weputara ọtụtụ n'ime akụkọ ya dị mkpirikpi na isiokwu ndị nwere ọgụgụ isi, akụkọ mkpirikpi ya, m, robot, na akụkọ nke The Twentieth Man.
Onye edemede Polish, bụ Stanisław Lem, kwuru banyere ihe ọmụma nke ọgụgụ isi nke obi ọjọọ na akwụkwọ ya bụ Cyberdia na Solaris (bụ nke e degharịrị ọzọ, ọbụna ugboro abụọ). A na-atụle ụfọdụ akụkụ nke ọgụgụ isi igwe na Golem XIV.
N'ezie, ọtụtụ n'ime akwụkwọ nke ụdị cyberpunk dị ugbu a bụ ihe jikọrọ ya na ịbanye n'ime ihe ndị mmadụ na igwe, iji merie echiche nke igwe igwe nwere ọgụgụ isi. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo Neuromancer William Gibson.
Ndị na-ege ntị na-ege ntị n'etiti ndị na-ege ntị na mmalite nke narị afọ gara aga metụtara ọtụtụ ndị Matrix, bụ ndị na-ekwu banyere ụwa nke ọgụgụ isi na-achịkwa nke mbụ mmadụ kere. Otu n'ime ọrụ ndị okenye a ma ama bụ Terminator or Blade Runner.
AIRu ọgụgụ isingwa igweneural networkneural networkngwa igweAmamịghe echiche
Lamborghini Huracan Ọkụ Na-ere Ọkụ Na-ere imgbọ ala Na-akpali akpali Anụmanụ Gif Free Download
1 awa gara aga
Lamborghini Huracan Pencil sere eserese eserese eserese eserese eserese ihe osise
Elekere 11 gara aga
Ọkụ ụgbọ ala na-ere ọkụ na-ere ụgbọ ala na-akpali animụpụrụ gif eserese n'efu
Ụbọchị 1 gara aga
Profaili Ihu Ihu Ihu Esereke Pensụl Pịnekọ Pịnekọ Ntughari Mmegharị Eserese Gif animim Animated Scribble Free Download
Oriri mkpụrụ osisi pensụl pensụl na-ese ihe osise na-akpali akpali gif animation Animated Scribble free download